China Portable Multi-band Bomb Jammer fanamboarana sy orinasa | Heweiyongtai
Ity vokatra ity dia manana habe kely, lanja maivana, izay mora entin'ny miaramila tsirairay. Ity fitaovana ity dia mahavita manao fitsabahana amin'ny fanoherana ny mpampihorohoro sy ny mpanao heloka bevava, fitaovana fanaraha-maso radio tsotra lavitra ampiasaina matetika ary fitaovana mipoaka lavitra mifehy izay namboarina tamin'ny fitaovana fifandraisana tsy misy tariby sivily.
Ekipa famoahana baomba, polisy manokana (SWAT), fiarovana VIP, tafika fiarovana, tafika miady amin'ny fampihorohoroana, ekipan'ny baomba, sampana miady amin'ny zava-mahadomelina, sampana fanaraha-maso ny sisintany, mpiasan'ny maso sivana, ireo karazana mpiasan'ny lalàna izay mahazo tombony be amin'ny fametrahana ireo misy an'ity rafitra jammer EOD tsara indrindra any an-dakilasy ity. Azon'izy ireo atao ny manatanteraka ny fomba fampiharana ny lalàna amin'ny fomba mahomby kokoa mba hampihenana ny fahafahan'ny mpitandro ny filaminana mamoaka ny vaovao.
（Ny atin'ny latabatra ity dia ho an'ny referansa ihany. Ny mpanjifa dia takiana amin'ny fanomezana tarika matetika ao anatin'ity endrika ity.）
A: vera fibre
Fanaraha-maso lavitra ny kilalao
B: fitaratra fibre
VHF matetika, Remote Controller
C: fitaratra fibre
UHF matetika, Remote Controller
Toro lalana namboarina
Bokotra mora ON / OFF, fampisehoana OLED mampiseho ny haavon'ny batterie
Ny DC24V & 30AH namboarina dia afaka manohana ny asa mitohy mandritra ny 60 minitra
miasa amin'ny mains AC.
29.5V & 2A Ny fotoana famerana farany dia 5 ora
Lanja (misy antena)
Azo itokisana sy hitazomana
MTBF≥1000 ora, ora MTTR≤1
Previous: Akanjo fanariana baomba
Manaraka: HWJXS-IV Telecommunopic Manipulator
Mpamokatra tsy andriamby
Detector vy ambanin'ny tany
Kitapom-bilona sy tsipika
Rafitra fitiliana fiarovana X-Ray azo entina, Fitaratra fitiliana fiara, Rafitra fizahana fiara fitaterana finday, Fakan-tsary fakan-tsary, Scanner X-Ray Portable, Masinina scanner X-Ray azo entina,